Mgbapu nke hydraulic, ihe na-emebi emebi, ime ahụ Bush - Monteono
Anyị na-agbalị kasị mma anyị na-akwado ozugbo mgbe-sales ọrụ maka n'ụlọ-mba ọzọ ahịa ụwa mbụ na klas ngwaahịaGỤKWUO
Ngwaahịa anyị nwere ezigbo mma yana kredit ịhapụ anyị ka anyị nwee ike ịhazi ọtụtụ ngalaba ụlọ ọrụ na ndị na - ekesa ihe na mba anyị.GỤKWUO
Anyị asambodo ISO. na OA ihe nchekwa achọrọ.GỤKWUO
Ọ na-arụpụta haịdrọlik hama maka ihe karịrị afọ iri. Nke a bụ mmalite nke usoro na-elekwasị anya na nchekwa na usoro ọ bụla
SOOSAN / FURUKAWA Series Hydraulic emebi N'ihi M ...
MES2500 MES3000 MES3500 MES4000 haịdrọlik nkume ...
FURUKAWA HB1200 Hydraulic emebi emebi Akara Kit Hamm ...
PC210 EX200 hydraulic hama emebi excavator ...
All Models Good Quality akara O-Ring Hydrauli ...
Road ígwè ụlọ akụkụ, inogide na-eyi ...
Factory Kpọmkwem Ree SB81 haịdrọlik emebi st ...
INDECO MES121 / 150 Nnọchi Akara maka ezumike H ...
Mba ndị anyị bugara mba ọzọ
AKA ỌR WOR
AHMAH. Na nka
Gaa Aka na Aka
Nkume ahia ahia Rockbreaker Systems kwesiri itolite site na 2021 rue 2024 bulitere nke oma | Onye edemede: Delta Engineering, Rock-Tech, Astec Australia, Wuxi Golink construction machinery, McQu ...
Dabere na akụkọ ọhụrụ nke Report Monitor wepụtara, aha ya bụ "Rockbreaker System Market: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast site na 2021 ruo 2027." Ahịa dị ọnụ ahịa na xx nde US dolla na 2019 ma na-atụ anya iru xx site na 2019 Otu nde US. Site na 2027, onyinye uto nke afọ a na-eto eto n'oge amụma bụ xx%. Ebumnuche bụ isi nke akụkọ ahụ bụ ime atụmatụ ọnụ ahịa usoro ahịa Rockbreaker zuru ụwa ọnụ na ikike uto nke ngalaba ahịa na ngalaba dị iche iche. Akụkọ ahụ na-enyocha n'ụzọ zuru ezu isi ihe ndị metụtara uto ahịa, gụnyere ndị ọkwọ ụgbọala, nrụgide, ohere bara uru, nsogbu ndị metụtara ụlọ ọrụ, na mmepe ndị na-adịbeghị anya. Ndị isi egwu kpuchiri na akụkọ a: Crusher Technology Company (BTI), O ...
Atlas Copco MB 1500 agbakwunyela na usoro mmepụta nke ndị na-agbaji ọkara: CEG
Ezubere ihe mgbakwunye hydraulic MB 1500 nke Atlas Copco Construction Tools Co., Ltd. ezubere na obere akụkụ na-akpụ akpụ ma nwee ntụkwasị obi kachasị mma. Ọ bụ ezigbo maka disassembly, okporo ụzọ injinịa, trenchi na nke abụọ nkume ndinuak. Ejikọtara akụkụ ọhụrụ ahụ yana ụdị anọ dị ugbu a iji mezue usoro ikuku nke ikuku Atlas Copco. MB 1500 na - agwakọta ike dị elu na ọnụọgụ mmetụta nke ihe ruru 640 na nkeji ọ bụla, si otú ahụ na - eme ka ọrụ ahụ gwerie. Tụkwasị na nke ahụ, a na-emepụta onye na-agbaji ọhụụ ọhụrụ na obere ihe iji belata mmezi ma gbatịa ndụ ọrụ. Ije ozi dị puku kilogram atọ na narị atọ. MB 1500 (kilogram 1501) dabara adaba maka ụgbọ njem nke 18.7 ruo tọn 32 (tọn 17 ruo 29). Onye na-eme mkpọtụ na-anabata usoro ntinye hydraulic nke 32 ...
China Excavator Mgbakwunye Mgbakwunye akụkụ Furukawa F35 Hb20g Hydraulic Jack Hammer Rock Concrete Breaker
EVOQUIP ekwuputala nhọpụta nke FJS Plant Repairs Ltd dị ka onye na-ekesa ikike na Ireland. FJSPlant ga - enye akụrụngwa EvoQuip zuru oke, gụnyere igwe ngwepịa, nyocha na akụrụngwa njem; mbụ akụkụ ahụ mapụtara; na mmezi igwe, na mba niile. Ruo ihe karịrị afọ 20, FJS Plant abụrụla onye ndu ahịa na Ireland niile na nnyefe, ndozi na ọrụ nke osisi mkpanaka na akụrụngwa ihe owuwu. Companylọ ọrụ ahụ nwere ebe obibi dị mma na ụlọ ahịa dị iche iche nke ọma, ma ugbu a nwere ndị ọrụ 25. Frank Smyth, Onye isi nchịkwa nke FJS Factory, kwuru, sị: “Obi dị anyị ezigbo ụtọ iso EvoQuip rụọ ọrụ iji kwado ndị ahịa na Ireland. Ngwaahịa EvoQuip na-agbakwunye ụdị anyị dị ugbu a, nke gụnyere Kubota Construction ...
Ruskpụrụ ahịa ahịa nke Crusher, Ohere na amụma amụma 2021-2027 | Circuit emebi Technologies (BTI), Osborne, Tramack, Delta Engineering
Los Angeles, USA: QY Research kwuru na ahịa zuru ụwa ọnụ nke Rockbreaker Systems na-atụ anya ịrị elu na oke egwu na afọ ole na ole sochirinụ. A na-akpọ akụkọ ahụ "Global Rockbreaker System Market Insights and Foreccast to 2027," ọ na-enyekwa nyocha zuru ezu nke ahịa na ibe ya. Ọ na - amalite site na nchịkọta ndị isi, nke gụnyere nkọwa na ogo nke ahịa ahụ. Ọ na-akọwa nkenke mpaghara bara uru yana na-eduga ahịa mpaghara mpaghara nke usoro sistemụ Rockbreaker zuru ụwa ọnụ. Akụkọ Rockbreaker Systems na-enyekwa atụmatụ ahịa dabere na ngụkọta ziri ezi. Nweta akwụkwọ nlele zuru ezu nke PDF nke akụkọ ahụ: (gụnyere TOC zuru ezu, ndepụta nke tebụl na chaatị, eserese) zuru ụwa ọnụ-rockbreaker-system-market Nyochaa ndị isi egwuregwu na Rockbreak zuru ụwa ọnụ ...
Hammer ndokwasa excavator iche iche arụmọrụ iji
1, na excavator ọrụ technology mbụ iji gosi na ọnọdụ gburugburu. Rotary ọrụ, gburugburu ihe mgbochi, teren mara akara, mma ọrụ; arụ ọrụ, iji kwado usoro ụzọ ntụgharị ihu na ihu, iji zere ịpị ma ọ bụ mmetụta; gbalịa ka ị ghara inye ụgbọala ikpeazụ na ihu nke ngwuputa direction, ma ọ bụghị mfe imebi moto-agba ọsọ ma ọ bụ sooks; arụmọrụ, iji hụ na ụzọ ziri ezi na kọntaktị zuru ezu na ala, mee ka nkwụsi ike dị ike nke igwe zuru ezu. 2, irè Ngwuputa usoro Mgbe ịwụ sịlịnda na njikọ dị n'etiti ịwụ mkpara, sịlịnda na ịwụ osisi gafere 90 ogo, kacha Igwu Ala ike; ịwụ ịwụ na ala na a 30 ogo n'akuku, Ngwuputa nke kacha mma na ala ịcha nguzogide kacha nta; na ogwugwu ịwụ, ...
Rockbreaker Systems si ahịa òkè na-atụ anya ...
Atlas Copco MB 1500 agbakwunyere na mmepụta ...
Chinese N'ogbe China Excavator Mgbakwunye Pa ...
Ruskpụrụ Crusher System Market, Ohere na ...